Ganacsatada yaryar ee suuqa X/weyne oo baaq u dirtay maamulka G/Banaadir – idalenews.com
Ganacsatada yaryar ee suuqa X/weyne oo baaq u dirtay maamulka G/Banaadir
Qaar ka mid ah Ganacsatadii laga burburiyay goobihii ganacsi ee ay ku lahaayeen Suuqa Degmada X/weyne ayaa ka dalbaday maamulka Gobolka Banaadir in la geeyo goobihii waratada si ay ganacsigooda u sii wataan.
Iyadoo maamulka gobolka Banaadir uu todobaadyadii la soo dhaafay waday burburinta dhismayaasha ganacsi ee sharcidarada ah oo ku yaala suuqyada Magaalada Muqdisho ayaa ganacsatadi laga burburiyay meelihii ay ku ganacsan jireen ee suuqa Xamarweyne wax ay sheegeen in ay ku faraxsanyihiin in ay baneeyaan wadooyinka suuqaasi.
Deeqo Jaamac oo ka mid ah ganacsatadaasi ayaa Radio Muqdisho u sheegtay in ay ka mid tahay ganacsatadii laga burburiyay meelihii sharcidarada ahaa oo ay ku ganacsan jireen, waxeyna ka dalbatay maamulka gobolka Banaadir in ay geeyaan goobohii ay ku ganacsan jireen waratada iyo gaarigacanleyda.
‘’Waxaan ka mid ahay ganacsatada yar yar ee ku ganacsan jirtay wadooyinka la baneeyay, dadkii lacagta heystana waxey kireysteen dhismayaal sharciyeysan, anaga hadaan nahay ganacsatada yar yar ma awoodno inaan kireysano dukaaman waaweyn, marka waxaan ka codsaneynaa maamulka gobolka Banaadir inuu noo diyaariyo meelihii ay ku ganacsan jireen waratada iyo gaarigacanleyda si aan usii wadano ganacsigeena’’ayeey tiri Deeqo Jaamac.
Maamulka G/Banaadir ayaa burburiyay dhamaan dhismayaashii sharcidarada ahaa ee laga dhisay hareeraha wadooyinka Suuqyada Bakaaraha iyo Xamarweyne hase yeeshee wuxuu maamulku taas bedelkeeda furay Bacadlihii Xamarweyne.
Axmed Madoobe oo ka walaacsan maamul u sameynta Kismaayo
Meydka nin dhalinyaro ah oo saaka lagu arkay koofurta Gaalkacyo